Jesse Lingard oo dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Manchester United – Miyuu ciyaarayaa kulanka Arsenal? – Gool FM
Jesse Lingard oo dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Manchester United – Miyuu ciyaarayaa kulanka Arsenal?
(Manchester) 9 March 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa kabihiisa u gacan galisay Jesse Lingard, waxaana uu ka qeyb qaatay tababarkii ugu dambeeyey oo ay xiddigaha kooxdu sameeyeen Jimcihii.
Lingard ayaa labo dhaawac ay soo gaareen isbuucyadii dhowaa, dhaawacii koowaad ayaa yimid kulankii ay kooxda Liverpool kula ciyaareen garoonkooda 24-kii bishii Febraayo ee horyaalka Premier League.
Xiddiga xulka qaranka England ayaana sidoo kale ciyaarin tan iyo markii uu dhaawac cajirka ah ka soo gaaray kulankii ay la dheeleen Paris Saint-Germain horraantii bishan, laakiin waxay u muuqataa in 26-sano jirkaan uu ku dhow yahay inuu ku soo laabto garoomada.
Lingard ayaa la sawiray isagoo ka qeyb qaadanaya tababarkii Jimcihii ay kooxdiisa Man Utd isagu diyaarinaysay kulanka ay garoonka Emirates Stadium kula soo ciyaari doonaan kooxda ay xafiiltamaan ee Arsenal.
Yeelkeede, Tababare Solskjaer ayeysan u badnayn inuu halis gelin doono Lingard kulan Gunners, macallinka reer Norway ayeyna u badan tahay inuu kubbad sameeyahan isticmaali doono kulanka ay wajahayaan Naadiga Wolverhampton Wanderers ee siddeed dhammaadka FA Cup-ka, kaasoo labada kooxood dhexmari doona 16-ka bishan Maarso.
🎥 There’s a lot to love about this — footage from Friday’s training session is 👌 pic.twitter.com/cEKecrGdPQ
Dhinaca kale Matic iyo Pogba ayaa labaduba ka soo muuqday tarbabarka ay kooxda Manchester United isugu diyaarinaysay kulanka Arsenal.